Madzimai Oratidzira Kusafara neKusungwa Kwavari Kuitwa
Vanhukadzi varatidzira muHarare neChipiri vachiti havasi kufara nekusungwa sungwa kwavari kuitwa nemapurisa vachifungidzirwa kuti vari kuita zvechipfambi.
Vanhukadzi vanodarika zana vaungana muHarare pa Africa Unity Square pavaratidzira vachiti havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nemapurisa ari kugara achingovasunga-sunga.
Mumwe wevaratidziri ava, Muzvare Rudo Chigudu, vati vakasungwa neChishanu chapfuura vakapomerwa mhosva yekufamba vachitsvaga varume asi ivo vaive nezvavaitofambirawo zvavo mudhorobha.
Muzvare Chigudu vati mushure mekunge vashungurudzwa nemapurisa, vakatozopedzisira vaona kuti havasi ivo vega vakasangana nedambudziko iri mushure mekutaura nemamwe madzimai. Vati vanhukadzi vanopedza basa manheru vari kushungurudzwa zvakare.
Muzvare Dorothy Takaendesa vanoti vakasungwawo pakati pedhorobha vakamirira shamwari komana yavo vakabhadhariswa faindi vachinzi vaiita zvechipfambi.
Asi mutauriri wemapurisa mupurovhinzi yeHarare, Va James Sabau, vati mapurisa anoita izvi nepamusana pekuti vanenge vachidzivirira hutsotsi hunoitika. Vati chave kudikanwa kuchinjwa kwemutemo unoita kuti vanhukadzi vasasungirwe nyaya dzekufamba usiku vachifungidzirwa kuti vari kuita zvechipfambi.
Mumwe wevaratidziri ava, uye vari munyori ane mukurumbira, Muzvare Tsitsi Dangarembga, avo vari munezvematongerwo enyika zvakare, vatiwo vachasvitsa gwaro renhuna dzavo kumukuru-mukuru wemapurisa, Va Augustine Chihuri, pamwe nebazi rinoona nezvinoitika mukati menyika vachiti zviri kuitwa nemapurisa izvi zvinotyora kodzero dzemadzimai dzekufamba pamadiro pamwe nekusangana pavanodira nehama neshamwari dzavo.
Vati kusungwa sungwa kuri kuitwa vanhukadzi vachipomerwa mhosva dzekungombeya vachitsvaga varume kunoita kuti paite sepane rusarura pakati pevanhukadzi nevanhurume sezvo vanhurume vasiri kusungwa.
Mapurisa anonzi ari kudaidza chirongwa ichi kuti "Operation Chipo Chiroorwa".